Abụ Ọma 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Iji Jehova mere ebe mgbaba
“Jehova nọ n’ụlọ nsọ ya” (4)
Chineke kpọrọ onye tigbuo zọgbuo na-amasị asị (5)
Maka onye na-eduzi abụ. Abụ Devid. 11 Ọ bụ Jehova ka m ji mere ebe mgbaba.+ Oleezi ihe mere unu ji asị m:* “Fere ka nnụnụ gaa n’ugwu? 2 Legodị otú ndị ajọ omume si na-ekwe ụta. Ha na-etinye akụ́ ha n’eriri ụta haKa ha nọrọ n’ọchịchịrị gbaa ya ndị obi ha dị ọcha. 3 Gịnị ka ndị ezi omume ga-emeMgbe a na-anaghịzi ekpe ikpe ziri ezi, mgbe a na-enweghịzi ihe e ji iwu kpọrọ?”* 4 Jehova nọ n’ụlọ nsọ ya.+ Ocheeze Jehova dị n’eluigwe.+ Anya ya na-ahụ ihe niile. Anya ya nke na-ahụ ụzọ nke ọma* na-eleru ndị mmadụ anya.+ 5 Jehova na-eleru ma onye ezi omume ma onye ajọ omume anya.+ Ọ* kpọrọ onye ọ bụla tigbuo zọgbuo na-amasị asị.+ 6 Ọ ga-esiri ndị ajọ omume ọnyà aghara aghara.* Ọ ga-eji ọkụ na sọlfọ+ na ifufe na-ekpo ọkụ bibie ha. 7 N’ihi na Jehova bụ onye ezi omume;+ ezi omume na-amasị ya.+ Ndị ezi omume ga-ahụ ihu ya.*+
^ Na Hibru, “Mgbe a kwaturu ntọala.”
^ Ma ọ bụ “nke na-enwu gbaa.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ọ ga-awụ ndị ajọ omume icheku ọkụ.”
^ Ma ọ bụ “Ọ ga-emere ndị ezi omume amara.”